Maalinta: Maarso 10, 2017
Şanlıurfa Metropolitan Municipal, Role Model ee Gaadiidka Dadweynaha: Şanlıurfa Metropolitan Municipal, oo loo soo qaatay tusaale ahaan abaalmarino lagu siiyay gaadiidka dadweynaha, ayaa sidoo kale soo bandhigtay waaya-aragnimadeeda iyada oo ah door lagu soo qaatay shirkii ay soo qabanqaabisay Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri. [More ...]
Gaadiidka bilaashka ah ee ardayda YGS ee Diyarbakir
Gaadiid bilaash ah oo loogu tala galay ardayda galaya YGS'ye Diyarbakir: Diyarbakir Dawlada Hoose, isbuucaan in lagu qabto kala guurka Imtixaanka Tacliinta Sare (YGS) ayaa shaaciyay in ardayda ay ka faaiideysan doonaan gaadiidka dadweynaha oo lacag la’aan ah. Duqa Magaalada Waaweyn, Cumali Atilla, [More ...]
Metro wuxuu ka imanayaa Istanbul oo ka yimid Ortakoy ilaa Sarıyer
Metrooga metrooga ah ee ka yimaadda Istanbul ilaa Ortaköy ilaa Sarıyer: Khad cusub oo tareen ah ayaa lagu dari doonaa mashaariicda weligood sii kordhaya ee metrooga ee İstanubul. Madaxweynaha IMM Kadir Topbaş wuxuu siiyay war wanaagsan. Topbaş, Ortaköy ilaa Sarıyer [More ...]
Mashruuca Mashruuca Gargaarka Akakaray wuxuu soconayaa 7 / 24
Howlaha Mashruuca Akçaray Tram XXXX / 7 wuu sii socdaa: Mashruuca treenka Akçaray, oo ay dhiseyso Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, ayaa sii socota habeen iyo maalin. Baaxadda mashruucan dhexdeeda, daraasado ayaa laga fuliyay meelo kala duwan habeenkii oo dhan. [More ...]
Adeegga adeegga gaarka ah ee IETT ilaa YGS
IETT'den YGS'ye waqti dheeri ah oo dheeri ah: IETT, 12 Imtixaanka Galitaanka Tacliinta Sare ee la qabanayo bisha Maarso (YGS) ayaa u socota codsi gaar ah. Isugeynta 118 ama xitaa 146 qalab dheeraad ah, adoo tixgelinaya waqtiyada imtixaanka [More ...]
Gaadiidka dadweynaha ee bilaashka ah ee YGS ee Malatya
Ardayda Malatya YGS'ye waxay galayaan gaadiidka dadweynaha lacag la’aan: Gawaarida dadweynaha ee Magaaladda Malatya, 12 waxaa la qaban doonaa Axadda bisha Maarso ardayda YGS'ye waxay ku qaadan doonaan bilaash. Golaha Dawlada Hoose ee Malatya, Maarso [More ...]
Tilmaamaha gaadiidka bilaashka ah ee ardayda gelaya YGS ee Izmir
Tilmaanta gaadiidka bilaashka ah ee ardayda galaya YGS'ye Izmir: 12 in la qabto Axadda Maarso Kala-guurka Imtixaanka Tacliinta Sare (YGS) sababta oo ah tallaabooyin isdaba-joog ah oo ay qaaday Dawladda Hoose ee Magaalada Izmir ee gaadiidka dadweynaha. Sidoo kale Izmir [More ...]
Wasiirka Ismet Yilmaz ayaa booqday TÜDEMSAŞ shirkadaha ganacsiga
Wasiirka Ismet Yilmaz Shirkadaha Dalxiiska U Yeelanaya Inay Sameeyaan Ganacsi TUDEMSAS: Wasiirka Waxbarashada Qaranka Ismet Yilmaz wuxuu booqday shirkadaha ganacsiga ku sameeya qaybta tareenka iyo TUDEMSAS ee Aagga Wershadaha abaabulan. Intii lagu jiray booqashada Wasiirka Yılmaz [More ...]
Weerar lagu qaaday saldhiga tareennada ee Dusseldorf ee Jarmalka
Weerar is-miidaamin ah oo ka dhacay xarunta tareenka ee Dusseldorf ee Jarmalka: Saldhigga tareenka ugu weyn ee Düsseldorf, Jarmalka, qof ayaa weeraray rakaab aan toos ahayn oo faas lagu qaaday 3'u culus 7 dad ah ayaa ku dhaawacmay shilka, xarunta tareenka ayaa loo daadgureeyay ujeedooyin amniga la xiriira awgood. [More ...]
Tareenka xawaaraha sare ee laga soo bilaabo Edirne ilaa Istanbul wuxuu ka yaraan doonaa saacadaha 1
Tareenka xawaaraha ku socda ee Edirne ilaa Istanbul, 1 wuxuu ahaan doonaa wax ka yar hal saac: Guddoomiyaha Edirne Günay Özdemir, “Shirweynihii Dhaqaalaha ee düzenlen waxaa lagu qabtay hoolka shirarka ee Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Edirne (ETSO), [More ...]
Shirkadda Saab ee iswiidhishka ayaa sameyn doonta kaabayaal tikniyoolajiyadeed oo garoonka diyaaradaha 3 ah: Gegada Diyaaradaha ee New Istanbul (IGA) oo isku dhafan nidaamka xakamaynta taraafikada hawada waxaa soo saari doona shirkadda iswiidhishka ee difaaca iyo amniga shirkadda Saab. Saab sidoo kale [More ...]
Madaxweynaha Albayrak ayaa ka qayb galay kulanka Xarunta Gawaarida ee Thrace Region
Region Madaxweynaha Albayrak Thrace dhigto shirka Center xamuulka: Hay'adda Horumarinta Thrace qaro Board Member of Tekirdag Duqa Metropolitan degmada Kadir Albayrak Trakya Development Agency ee Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State la Thrace [More ...]
TCDD miyey wax ku iibsan doontaa KPSS 2017 / 1 loogu talagalay cadowga uu abuuray? : Waxaan la yaabanahay hadii TCDD ay shaqaalaha ogeysiisay DPB ballankeeda Juun. Si kastaba ha noqotee, saraakiisha TCDD waxay caddeeyeen inaan wax shaqo ah laga qaban soo iibsiga. [More ...]
Goorma ayaa la furayaa Isgoysyada Skopje ee Uksu? Sidee waddadu u noqon doontaa?
Üsküdar Çekmeköy metro ayaa laga filayay muwaadiniinta. Waxaa loo bilaabay tirin-tareenka dhulka hoostiisa ee Üsküdar Çekmeköy. Tareenka dhulka hoostiisa mara ee Üsküdar Çekmeköy wuxuu leeyahay xarun 16, taasoo yareyn doonta taraafikada kooxda Anatolia illaa xad. [More ...]